Xiddiga Kooxaha Premier League U Waalanayaan Ee Hakim Ziyech Oo RikooDH Cajiib Ah Ku Garaacay Lionel Messi iyo Kevin de Bruyne - Gool24.Net
Xiddiga Kooxaha Premier League U Waalanayaan Ee Hakim Ziyech Oo RikooDH Cajiib Ah Ku Garaacay Lionel Messi iyo Kevin de Bruyne
December 4, 2019 Abdiwahab A. Abeye
Kooxaha horyaalka Premier League ee lacagta haysta, waxay haystaan cudur-daar dhab ah oo ay qasnaddooda ugu jabiyaan laacibka Ajax ee Hakim Ziyech oo rikoodho taariikhi ah ka samaynaya garoomada.
Xili ciyaareedkii hore ee 2018, Ajax waxay ku guuleysatay horyaalka waddanka Netherlands, sidoo kalena waxay mucjiso ku noqotay Champions League oo kooxo waaweyn ka tuurtay. Laakiin markii uu xili ciyaareedkaasi dhamaaday, waxa fursado haystay kooxo badan oo reer Yurub ah oo kaliya €25 milyan ku qaadan karayey Hakim Ziyech, waxaanay lacagtaasi ahayd midda lagu burburin karayey qandaraaskiisa.
26 jirkan u dhashay Morocco, waxa uu hadda qiimihiisu marayaa €100 milyan, sababtuna waa bandhigga cajiibka ah ee uu sameeyey oo ka dhigtay ciyaartoyga ugu waxqabadka badan Yurub marka laga hadlayo gool-caawinta.
19 kulan oo dhamaan tartamada ah oo uu Ajax u saftay xili ciyaareedkan, waxa uu caawiyey 20 gool oo ay asxaabtiisu dhaliyeen, mana jiro ciyaartoy kale oo rikoodhkaas oo kael sameeyey dhamaan horyaallada waaweyn.
Xili ciyaareedkii hore, waxa uu sameeyey 24 gool oo uu caawiye ka ahaa, asxaabtiisuna shabaqa taabsiiyeen, waxaase u raacayay goolal uu isagu dhaliyey, balse xili ciyaareedkan oo hadda maraya bishii December oo bilow ah, rikoodhkiisu waxa uu ka sarreeyaa Lionel Messi iyo Kevin de Bruyne oo aan hore usoo samaynin xilliyadan oo kale gool-caawin intaas le’eg.
Kulankii dhex-maray Ajax iyo Chelsea ee ku dhamaaday 4-4, waxa uu Ziyech sameeyey saddex gool, waxaana hadda uu caddeeyey sababta ay kooxaha waaweyn ugu waalanayaan ee ay tahay inay kiishkooda lacagta ugu ballaqaan.